အနားယူ သတငျးအခကျြအလကျ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » Sightseeing » အနားယူ သတငျးအခကျြအလကျ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် စွမ်းအင်ထုတ်စက်ရုံများ
မော်တော်ကား၊ စက်ရုပ် စက်ရုံများ
Updated: 2016-11-11 09:39
နကမြစ်နှင့် ဟကတမြစ်နှစ်ခုဆုံရာတွင် ရှိပြီး အရှည်၁ကီလိုမီတာ၊ အကျယ်၂၀၀မီတာရှိသော နကဆုဧရိယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အနောက်ပိုင်းတွင်နာမည်ကြီး မြို့လယ်ကောင်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားပြီး လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များမှ စားသောက်ဆိ...
Updated: 2016-10-27 16:38
ဂျပန်နိုင်ငံ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် တာသဲကိုးရာ ဂုရာကျောက် မိုင်းတွင်း ကြီး
ဂျပန်နိုငငံ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် တာသဲကိုးရာ ဂုရာကျောက် မိုင်းတွင်း ကြီး ကို ၁၉၄၃ ခုနှစ် ၅ လပိုင်း ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင် လည်ပတ် ခဲ့ တဲ့ မိုင်း တွင်း ကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သံ ကွန်ကရစ် တို့ ဖြင့် အခိုင် အမာ တည်ေ...
Updated: 2016-10-06 13:18
ဘဲ့ပု ရေပူစမ်း အပန်းဖြေစခန်း( အွန်းဆန်း )
မြောဘန်းအွန်းဆန်း ( ရေပူစမ်း ) ဟာ သဘာဝ ဓါတ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်လျက် ရှိပြီး ရေခိုး ရေငွေ့ပမာဏ များ တဲ့ ဘဲ့ပု ရေပူစမ်းဒေသ က နာမည်ကြီး ရေပူစမ်း ၈ခု အတွင်း အပါအ၀င်ဖြစ်သော ရေပူစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အယ...
စက်ရုံ နှင့် အသုံးအဆောင်စက်ရုံများ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းအပနျးဖွစေကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြား
Updated: 2016-10-03 15:26
အိမ မူရ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း
မျှော်စင် နှစ် ခု ပါရှိတဲ့အနောက်ဥရောပ ၁၀၀၀~၁၂၀၀ခုနှစ် Romanesque architecture ဒီဇိုင်း ဖြင့် ဆောက် လုပ် ထား ပြီး ၊ အုတ်များ ဖြင့် တည်ဆောက် ထား သော ဂျပန် နိုင် ငံ အတွင်း တွင် ပင် ရှားပါး ဘုရာ...
Updated: 2016-09-13 13:11
တာခဲအို မြို့တော် စာကြည့်တိုက်
တာခဲအို မြို့တော် စာကြည့်တိုက် ကတော့ ၊ ဆာဂ ခရိုင် တာခဲအို မြို့ တော် တွင် ရှိသော နာမည်ကြီး အဆောက်အဦးများ စုစည်းရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက် ၊ သမိုင်း ပြတိုက် အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ထို အဆောက်အဥ...
Updated: 2016-09-01 15:29
ဥမိ တာမ ပါ့ခ် စွတ်ခုမိ လင်းပိုင် ကျွန်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီ လ တွင် စွတ်ခုမိ ရော ရ ကမ်းရိုးတမ်းမှာ ဖွင့် လှစ် ခဲ့ တဲ့ ပါ့ခ် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ် ပြင် ကို အသုံး ပြု ထား သော ကြီးမား တဲ့ လင်းပိုင် ဖျော်ဖြေ ပွဲ များ ၊ နောက်ပြီး ထို...
Updated: 2016-08-30 13:17
ခုဂျူး ရှင်းရင်း ပန်းခြံ နှင်းလျှော စကိတ်ကွင်း
ခုဂျူး တောင်းတန်း တွေကပတ်ပတ်လည် ၀န်းရံ ထားပြီး သာယာလှပတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကြီး ရဲ့ အလယ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ( ခုဂျူး ရှင်းရင်း ပန်းခြံ စကိတ်ကွင်း ကြီး ) ဟာ န...
ချူဝိုဖုတိုခုတွင် တည်ရှိပြီး အမြန်သင်္ဘောဘီတယ်(JRခရူးရှုးအမြန်)၊ ကိုဘီ (နောင်အမြန်သင်္ဘော)၊ နယူးခမဲရိအ(ခမဲရိအလိုင်း) စသည်ဖြင့် ကိုရီးယား၊ ဘူဆန်သို့ကူးသန်းသွားလာနိုင်သော သင်္ဘောဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဖေးများ၊ စားသေ...